May 2009 – Everybody Read TChen
Posted on May 28, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ17 Comments on မိုးနဲ့ တီချမ်းခင်တဲ့မိန်းမတွေ
ဒါကြောင့် တူမတော် ကို ငမိုက်သားများနဲ့ တောင်စွယ် နေကွယ်ရင်………………….
myittaryongpyan: အင်း … အထိမ်းတော်တွေ လျှေက်တင်တာဖြင့် ဒွေးတော်ရဲ့ ကျန်းမာရေး မကြာခဏ ဆိုသလို နေထိုင်မကောင်းဖြစ် ဆိုပ…
Posted on May 27, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ15 Comments on နန်းဆန်တဲ့ တူအရီး (သို့) ငပေါဂေဟာနှင့်အပြိုင်ပေါခြင်း
Posted on May 26, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ12 Comments on ကြယ်ကိုစီပြီး လေထဲမှာ ရေကိုရှူတဲ့လူ
Posted on May 25, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ8 Comments on မချော ၄ ယောက် ကိုယ်တယောက်
Posted on May 21, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ17 Comments on တွေးမိတာလေးတွေ…………
ဥပမာ………………လို့ ပြောလိုက်တယ် လို့ပဲဆိုကြပါစို့
တောင်းပန်းပါတယ် ဆိုတာ ကလဲ အင်း…………………
Posted on May 20, 2009 February 7, 2018 Categories diary, Uncategorized, Uncategorized11 Comments on စနောက်ခြင်း
Posted on May 19, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ10 Comments on ဘ၀ ဘ၀ ဘ၀
Posted on May 17, 2009 February 7, 2018 Categories jewel's songs ခံစားမှုများ, Uncategorized, Uncategorized, ပုံတွေ9 Comments on အရူးထတဲ့ ကစားနည်း
Love the people who treat you right and forget about the ones who don’t.
Posted on May 16, 2009 February 7, 2018 Categories diary, Uncategorized, Uncategorized1 Comment on Close friend day တဲ့လားကွယ်
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဖတ်ပြီးသွားလို့ စိတ်ညစ်ရရင် ဘလောခ်လောက ရဲ့ မဲပြာပုဆိုးတထည်၊ရန်ဖြစ်ပွဲတပွဲတိုး တယ်ပဲ ထားလိုက်ပါ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…………..
Posted on May 15, 2009 February 7, 2018 Categories diary, Uncategorized, Uncategorized10 Comments on ဖိုးစိန်ရှာတဲ့ ပြဿနာ (သို့) ကြောက်စရာတီတီချမ်း (သို့) အပျက်ပျက်နဲ့သွေးထွက်တဲ့ နှာခေါင်း (သို့) sensitive ဖြစ်ခြင်း